Ndidzo Mvumo YeMukurumbira Inogoneka Kushambadzira Sarudzo? | Martech Zone
Yekuremekedzwa Endorsement yagara ichionekwa senge inoshanda sarudzo kumakambani kusimudzira zvigadzirwa zvavo. Makambani mazhinji anotenda kuti zvigadzirwa zvavo zvine hukama neanozivikanwa mukurumbira zvinobatsira kutyaira kutengesa. Vatengi vanoita sevasina chokwadi nezvesimba ravo ne51% vachitaura kuti mukurumbira wemukurumbira haune musiyano pane kwavo kwekutenga sarudzo.
Ipo iyo ROI pane akawanda maratidziro ekuyera ari kuyerwa - ROI pane mukurumbira mvumo zvinogona kuve zvakaoma kuverenga. Kune akawanda mabhenefiti angango sanganisika neakakurumbira endorsement asi kune zvakare zvakawanda zvingangova misungo inoda kuongororwa zvakanyatso.
Iyi misungo inogadzirwa kana iwe ukavimba chete kune mumwe mukurumbira kusimudzira chigadzirwa chako. Mukurumbira wekambani yako unogona kunge uri mumawoko emunhu mumwe chete uyo mufananidzo wake unogona kuchinja nehusiku husiku nekuda kwechimwe chinyadzo chemukurumbira. Zvakakosha here kuita njodzi iyi?
Nekuda kweizvi, kubudirira kwemukurumbira kutsigirwa kunosiyana zvakanyanya uye inyaya chaiyo yevamwe vanoshanda uye vamwe kwete. Iko kukosha kwekusarudza akakodzera mukurumbira kwakakosha kudzikisa njodzi yekushambadzirwa kwakaipa kukambani yako. Izvo zvakakosha kuti urambe uchifunga kuti njodzi dzinosanganisirwa nevakakurumbira endorsement hadzifi dzakambobviswa zvachose, uye kugadzirisa kune zvakashata kukonzeresa kwemukurumbira kutsigira kunofanirwa kugadziriswa nekuchenjerera.
Iyi infographic kubva Saina A Rama Toronto inokupa iwe manhamba pamusoro pekuti ane mukurumbira sei mukurumbira kuvimbisa, uyezve nyaya dziri kumashure kweanobudirira uye asina kubudirira mukurumbira zvibvumidzo mumakore ese.
Tags: beyoncebritney spearscatherine zeta jonesmukurumbira endorsement infographicmukurumbira wekusimbisa mubairomukurumbira wekusimbisa njodzimukurumbira kubvumidzwadavid beckhamDonald kwehwamandaellen degenereskardashiansNicole Kidmannielsenoj SimpsonrihannasignaramasignoramaToronto